Soosaarayaasha iyo Soo-saareyaasha Taarikada Biraha ee birta u adkaysata | Kunda
Saxanka Birta Kaarboon
Xidho saxanka birta adkaysi u leh
Cimilada U Adkaysata Cimilada
Xaashida Birta ahama
Birta Cimilada ayaa loo bandhigi karaa jawiga iyada oo aan la rinjiyeyn. Waxay ku bilaabataa miridhku si la mid ah sida birta caadiga ah. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxyaabaha isku dhafan ee ku jira ayaa sababa lakab dusha ka ilaaliya oo ah miridhku qaab-dhismeedkiisu fiicanyahay si ay u samaysmaan, oo markaa u xakameeyaan heerka daxalka.
Cimilada hawadu waxay muujisaa iska caabin wanaagsan oo daxalka ah marka loo eego birta caadiga ah, waxay leedahay walxaha ugu yar ee daawaha ah ee aan jeclayn birta birta ah qiimaheeduna ka raqiisan yahay birta. Birta cimiladu waxay ka caawineysaa yareynta kharashka nolosha iyo culeyska bey'adda ee dalabyo kala duwan.
Birta waxaa loo isticmaalaa noocyada kala duwan ee alxamida, la xiray iyo kuwa la jeexjeexay sida dhismayaasha biraha birta ah, buundooyinka, taangiyada iyo haamaha, nidaamyada qiiqa, gawaarida iyo qalabka dhismaha.
Heerka iska caabinta cimilada iyo tusmada waxqabadka
Awood Bixin N / mm²
Awoodda siligga N / mm²
0.3 mm-2 mm (qabow duudduuban)
2 mm-50 mm (kulul duudduuban)
gariiradda ama sida aad ugu baahan tahay dherer
Gariiradda: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Length (customized)
Saxanka: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000
Hore: Xaashida Birta ahama
Xiga: Xidho saxanka birta adkaysi u leh
Fagaaraha & tubka qaabeeya
Ahama steel Round Bar / Rod